Coca i-Closet yam ngu-Eminem - Izinto Zobugcisa
Coca i-Closet yam ngu-Eminem
Kule ngoma uEminem uthetha ngomama wakhe oziva engakhathalelwanga kwaye emphethe kakubi. Xa esithi 'Khumbula xa uRonnie wasweleka kwaye usithi unqwenela ukuba ibindim lowo,' ubhekisa kumalume wakhe uRonnie owazibulala ngo-1991. U-Eminem unetattoo enegama lakhe engalweni yakhe yasekhohlo ethi RI.P. noRonnie ebhalwe ngezantsi kwayo.
UModi Palmer-eHouston, TX
Oku kusetyenziswa kwezinye zeetreyila zokuqala zebhanyabhanya kaEminem Imayile eyi-8 . Kwakuza kubonakala kwifilimu, kodwa u-Eminem wala ngenxa yokuba wayecinga ukuba yeyomntu. Wabhala 'Zilahle' ukuze asebenzise kumdlalo bhanyabhanya kwaye waqinisekisa ukuba ubhala njengonobumba awudlalileyo kumdlalo bhanyabhanya.
Ibinzana elithi 'Ukucoca ikhabethe lam' lithe ukuba udiniwe kukugcina inyani malunga nexesha lakhe elidlulileyo ngaphakathi, kwaye ufuna ukwazisa wonke umntu malunga nezinto ezenzekileyo ebuntwaneni bakhe.
Ngesinye isikhathi, u-Eminem udlwengula malunga nonina ene-Munchausen Syndrome, yimeko apho umntu efaka ukugula ukuze aqwalaselwe. Kule meko, u-Eminem umtyhola umama ngokumgcina egula ngale njongo.
UMary-Baltimore, MD, ngaphezulu kwe-2
Xa u-Eminem eqhekeza, 'Ngaba ayisosizathu sokuba undenzele iCD, ma, ukuze uzame ukuthethelela indlela ondiphathe ngayo?' Ubhekisa kwi-CD ka-2001 ebizwa ngokuba yi-'set the Record Straight 'yi-rap duo ID-X. Idiski iqulethe ingoma ebizwa ngokuba 'nguDarshall othandekayo' apho uDebbie Mather, ongumama kaEminem, afundela unyana wakhe ileta.
Ngomkhondo wakhe ka-2013 'Izibane eziphambili,' u-Eminem uyaxolisa kunina ngale ngoma xa edlwengula, 'Ndiyaxolisa mama ngo' Cleanin 'Out My Closet.' 'Ukwabandakanya umgca ngendlela awaphosa ngayo ingoma kuluhlu lwazo : 'Le ngoma andisayihlawuli kwimiboniso kwaye ndiyarhwaqa ngalo lonke ixesha kukanomathotholo.'
obhalileyo akunakunceda ukuthandana
hayi ndifuna ukuthandana nawe
sukudlala ngam ngoba udlala ngomlilo
ndiy venus yakho ndingumlilo wakho lyrics
Into oyifunayo luthando luthando yonke into oyifunayo
Ingelosi inombolo 222 enentsingiselo